बारामा चोरीको समान सहित दुई जना पक्राउ – Radio Badal
By radiobadal	 On Sep 7, 2020
रामाशंकर कुशवाहा बारा,२२ भदौं –बाराको महागढीमाई नगरपालिका वडा नं. १ गढीमाई मन्दिर छेवमा रहेको राधेश्याम दासको कसमेटिक पसलमा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जयसवालको पसलमा यहि भदौं २० राती चोरी भएको थियो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा महागढीमाई नगरपालिका वडा नं. १ निवासी २० बर्षिय भोला भनिने निलेश जयसवाल र १८ बर्षिय रुसतम अंसारी रहेको बरियारपुर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरिक्षक प्रमोद साहले बताउनुभयो । प्रहरीले सोधपुछको क्रममा उनीहरुले दिएको व्यानको अधारमा चोरीको समान पनि बरामद गरेको छ ।
उनीहरुले चोरी गरी सके पछि सम्पूर्ण समानलाई बन्द अवस्थामा बरियारपुरमा रहेको कृषि संस्थानको भवनमा लुकाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र प्रहरी चौकी बरियारपुरको सयुक्त टोलीले चोरी भएको दुई दिन भित्र समान सहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । चोरहरु पसलको सम्पूर्ण समान चोरी गरी लगेको दुई दिनमै प्रहरी उनीहरुलाई समान सहित पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ।